Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Iyo Bangiga Adduunka Oo Ka Wada Hadlay Hormarinta Dhaqaalaha Dalka – Kalfadhi
Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Iyo Bangiga Adduunka Oo Ka Wada Hadlay Hormarinta Dhaqaalaha Dalka
November 6, 2018 November 6, 2018 Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa Bangiga Aduunka ka codsaday inuu markasta soo siiyo Golaha warbixinada u muhiimka ah dhaqaalaha dalka, si ay wax uga bartaan. ” Xubnaha ka socday Bangiga Aduunka waxaan ka codsanay iney mar walbo noo soo gudbiyaan warbixinada muhiimka ah, si aan ula jaanqaadno caalamka, dhaqaalaha dalkana uu u sii hormaro” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda, Miisaaniyadda iyo Qorsheynta ee Golaha Shacabka, Mudane Cali Cabdi Cismaan.
Warbixin la soo dhigay Feysbuugga Golaha Shacabka ee BJFS ayaa lagu qoray inuu Bangiga Aduunku balan qaaday ka jawaabista codsiga Guddiga Maaliyadda, Miisaaniyadda iyo Qorsheynta ee BJFS. “Waxay noo balan qaadeen iney wax badan naga caawin doonaan” ayuu yiri Guddoomiye Cali.
Inkasta oo warbixinta lagu sheegay iney labada dhinac si fiican uga wada hadleen hormarinta dhaqaalaha dalka iyo ka faa’iideysiga fursadaha banaan, haddana laguma faahfaahin sida iyo habka loo hormarinayo dhaqaalaha dalka iyo ilaha dhaqaale ee la abuuri karo hadda kadib. Sidaas oo kale, lama caddeyn nuuca fursadaha jira hadda ee looga faa’iideyn karo dhaqaalaha dalka. Waxaase warbixinta lagu sheegey iney Bangiga Aduunka iyo Golahu isla garteen yeelashada xiriir xoogan, oo wada shaqeeneyd.
Golaha Shacabka wuxuu sheegay inuu Bangiga Aduunku la wadaagay Golaha, Guddigiisa Maaliyadda,
Miisaaniyadda iyo Qorsheynta, barnaamijyo hormarineed oo ku aaddan dhinaca dhaqaalaha, kuwaas oo uu hadda ka wado Soomaaliya. “Soomaaliya waxa ay ku socotaa waddo wanaagsan, oo dhanka dhaqaalaha ah. Waxaan soojeedineynaa, hadaan nahay Bangiga Aduunka, in laga faa’iideysto fursadaha banaan, oo wax badan oo dadaal ah la sameeyo, anaguna, mar walba, waan idin garab taaganahay” ayuu yiri Hugh Riddell, oo ka socday Bangiga Aduunka.
Sida uu Goluhu sheegay, waxa uu Guddiga Maaliyadda, Miisaaniyadda iyo Qorsheynta ee BJFS sheegay inuu Bangiga Aduunka la wadaagay waxa ay qabtaan, hawsha ay hadda hayaan iyo waajibaadka saaran, ka guddi ahaan. “Waxay, sidoo kale, la wadaageen Bangiga Aduunka waxyaabaha uu Golaha Shacabku u baahan yahay” ayaa lagu yiri warbixinta.
Dowladda Federalka Ayaa Ku Celisay Ineysan Aqbali Doonin Iney Doorashada Koofur Galbeed Dib U Dhacdo
Madaxweynaha Jubbaland Oo Wasiirrada Amniga Maamul Gobolleedyada Shir Uga Furay Kismaayo